W.Q. Liban B. Mohamud
Sadex iyo tobon sano ayaa laga joogaa markaan kasoo baqoolay dhulkaygii hooyyo ee Soomaaliya. Bilowgii safarkeygii dheeraa wuxuu ahaa mid dhibyar oon wax digniin ah ka bixin shiddooyinka dalkayga kusoo fool lahaa. Intaan hayyey wadada dheer ee Xamar uga baxda dhanka Kismaayo, Waxaan aad ula dhacsanaa bilicda iyo barwaaqada ka muuqatay nawaaxiga iyo hareeraha waddada. Geedaha canbaha ahee boqoljirsaday eed moodid inay kusoo dhaweynayaan, dalaga beeraha ee goosashadoodu soo dhawaatay ee sida isle’eg dabayshu hadba gees ugu ruxayso, iyo cirka buluuga ahiba waxay I xasuusinayeen maaddadii Juquraafiga Soomaaliya. Socdaalkaas Kismaayo I geeyey marna kama muuqan inuu bilow u yahay kii aan aakhirkii ku imid bartamaha galbeedka America. Wax aan ku garto inuu hordhac u yahay bur-bur iyo barakac Soomaaliyeed marna kama dareemin.
Ma garaadyari bay iga ahayd mise xawaarihii dhacdooyinku ku socdeen baan marna la odorosi Karayn?
Si kastaba ha ahaatee, maanta Soomaaliya waa meel ay kasoo dhamaadeen dadkii aan aqaannay intoodii badnayd—qaraabo, deris iyo ardayba. Waa meel magac mooye macnihii dal lahaa ka idlaaday. Marka Soomaaliya la sheego waxaa ku lifaaqan; gaajo, cudurro, barakac, dil, kufsi, abaar, mooryaan, jirri, qab-qable dagaal iyo tacaddiyo kale oon lasoo koobi Karin. Marka lasoo gaabiyo, Soomaaliya waxay noqotay sheeko naxdin badan oo soo noq-noqotay.
Anigoo qoraalkayga Xamar udub-dhexaad uga dhigaya, akhristow iga hoo sadaradan baroordiiqda ah een ku xasuusanayyo waayihii bari-samaadkii.
Ka bilow Dugsi-quraankii Macallin Cumar-Jiifto ee ku dhegenaa albaabka laga galo Masaajidkii Shiikh Maxamed-Biimaalow, waqooyi-galbeedna kaga beegnaa saldhiggii booliiska ee xaafada Hawl-wadaag ee Siciid-Buuryaqab madaxda ka ahaa. Ma xasuusataa suuqii Miijiska iyo Mawlacii Macallin-Nuur? Haddaad intaa garato waxaad xasuusatay xaafaddii aan ku koray. Ka waran Dhakalow, Baar- Bakiin, Tookiyo, iyo weliba dugsigii sare ee Cismaan Geedi Raage?
Waxaan birimo ka bilaabay dugsigii hoose dhexe ee Hawl-Wadaag, dugsi quraankana waxaa la I geeyey dugsigii Macallin Cumar ee masaajidka Shiikh Maxamed-Biimaalow ee hoos imaan jirey maamulka xerta Macallin-Nuur. Waxaan darisnay dhallinyaro aan wada bar-baarnay oo subcinta, banooniga, iskoolka, kaalafootada, urugleyda, guluuska, iyo shineemada intaba wadaagnay. Waxaan si wacan u xasuustaa siyaarada Shiikh Maxamed-Biimaalow iyo tahliisheedii, Carwadii qaranka Soomaaliyeed iyo bakh-tiyo-nasiibkeedii, iyo ciyaartii Yool-yoolka ee cawaysinka la ciyaari-jirey. Waxaan goconayaa habkii loogu dabaaldegi jirey Labadii Ciidood ee waaweynaa iyo sidii loo soo dhaweyn-jirey bisha barakaysan ee Ramadaan. Xafladii kowda Luuliyo iyo tii Kacaankuba waa muuqaallo iyo sawirro xusuustayda ku aasan. Weli ma halmaamin jilaygii qadda lagu riiqi-jirey, qallinkii sida xardhan looqori-jirey, looxii la cagaarin-jirey, iyo sidii farshaxanka lahayd ee quraanka loo tashiili-jirey.
Xusuusahaas maaankayga kusoo maaxanaya waxaa ugu cad-dad kuwa ku saabsann dhacdooyinkii xiligii dugsigeygii dhexe. Waxaan ka mid ahaa ardadii aad ku ugu wacnayd waxbarashada. Waxaan ku guuleystay inaan xubin fir-fircoon ka noqdo xulkii aqoonta lagu soocay ee ka qeyb-galay barnaamijkii Kadis iyagoo matalaya dugsigooda. Barnaamijkaas waxaa laga baahin-jirey Telefishankii iyo Idaacaddii Qaranka. Waxaan weli ka fekeraa halka ay ku danbayeen qaar ka mida ardadii Kedis igula jirtey. Xiligaasi wuxuu ahaa xilli aqoon-isweydaarsi oo ardadu isku xujaysato bedad-ka, tirada-dadka, iyo caasimadaha dalalka Afrika. Waxaan dusha ka qaybsaneyn hogaamiyayaashii dunida carabta oo dhan. Waxaa nala baray taariikhdii xornimo-u-dirirka Afrika iyo aabayaashii istiqlaalka keenay. Axmed Sakatuuri-gii reer Geni, Nakruumihii reer Gaana, iyo kooxdii ‘Mow-Mow’ ee Kenyatta hogaaminayey waxay ka dhex-muuqdeen casharadii maaddada Taariikhda ee naloo dhigay. Wuxuu ahaa xilli ardadu ku mash-quusho ‘Aqoon-Guud’ oo maalin-walba halxiraale cusub iyo mas’alo xisaabeed aadan horey u arag lagugu dayo.
MAANSADII OSMAN DAHIR
HOOYAA QOYS KU DHISNAA::
Dhammaadkii dug-sigeygii dhexe waxaa aad usoo ifbaxay baraaruggii Islaamka eey horseedka ka ahaayeen dhallinyaradii ‘wadaaddada’ loo bixiyey. In badan oo bulshada ka mid ah ayyaa waxaa is baddalay aragtidoodii diineed iyo toodii siyaasadeed. Waxaa xiiso dheeraad ah yeeshay duruustii ka bixi jirtey masaajidda iyo khudbooyinkii salaadaha jimcaha. Waxaa bilowday dhaq-dhaqaaq iyo muuqaal diineed, waxaana abuurmay jawwi Niqaash iyo dood watta. Erayo cusub oo diin xambaarsan baa kusoo biiray sheekada iyo is-waraysiga dadka; xijjaab, indha-shareer, Akhwaan, khuraafaad, qubuuri, iyo kuwo kaleba. Baal cusub ayyaa ku qormay taaariikhda dhaqan-siyaasadeed ee Soomaaliya.
Akhristow, waxaa weli ii muuqda fasaladdii aan ka fariisan-jirey dhismihii dugsigii sare ee Jamaal Cabdu-Nasir, walina waa xasuusta magacyaddii macalimmiintii reer Masar ee wax noo dhigi jirtey. Way ii sawirantahay siday astaantii ‘Allaah’ ee surnayd dhalada dhismaha iskoolka Jamaal Cabdu-Naasir habeenkii u ifi jirtey. Waxaa dhismahaas dhan walba ka xigay goobo muhimad gaara ku lahaa magaaladii Xamar. Masaajidkii Isbahaysiga, aqalkii Umadda, taalladii Sayid Maxamed, iyo Dhagax-tuurba waxay ahaayeen bar-til-maameedyo qaran oo sii-socod iyo soo-socod ba aan arki jirey. Waxaa dhanka koonfur-bari iskoolka ka kulaalayey dhismihii Radio Muqdisho, kii Matxafkii Qaranka, Masraxii, iyo weliba taaladii Xaawo-Taako. Intoo dhan waxaa uga dhawaa gurigii SYL-sha oo astaan iyo xusuus u ahaa curintii, halgankii, iyo dhalintii xornimadii Soomaaliya.
Bal malee daris-wanaaggii? Bal xasuuso maalin-jooggii iy qaraabo-salaankii? Waxaa loo baroor-diiqaa wax abidkood la tabi doono. Nabaad-guurka Xamar ku dhacay waa mid indheer-garad, waa mid aqooneed, waana mid dhaqan iyo bulsheed. Waxaan tabayo oo xiisuhu ii hayyaa waa quruxdii iyo qaayihii magaaladu lahayd iyo weliba dadkeedii firdhay, Culumadeedii qaxday, aqoonyahankeedii guurey, iyo dhallinteedii han-jabtay.
Mee Shariif Cabdi-Nuur? Meese Sheekh Cali-suufi? Oo mee sheikh Daahir?
Caadifadda aan Soomaaliya u hayyo waa mid gun dheer. Si aysan qormadu iiga dheeraanse aan ku xiro gunaanadkan: Xamar magaalo uun maahayn ee waxay xarun iyo astaan u ahayd dalkii mar Soomaaliya la oran-jirey. Sida ugu dhow oon dareenkeyga ku cabbiri-karo waa su’aashii xeesha deerayd ee Hadraawi.
Xayaabkii cir da'ayeey
Liban Beddel Mohamud wuxuu degganyahay nawaaxiga magaalooyinka Mataanaha ee gobolka Minnesota.
Waa maanso cusub oo uu curiyey hal abuur Cusmaan Ducaalle Daahir, waxayna si weyn uga hadleysaa... Guji..